Sheekh Cali Dheere oo ka hadlay socdaalkii Uhuru Kenyatta ee degmada Dhoobley (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sheekh Cali Dheere oo ka hadlay socdaalkii Uhuru Kenyatta ee degmada Dhoobley (DHAGEYSO)
Iyadoo dhawaan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu socdaal qarsoodi ah ku tagay degmada Dhoobley ee gobolka J/hoose ayaa waxaa arrinkaasi si kulul uga hadlay afhayeenka Xarakada Al-shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali Dheere).
Sheekh Cali Dheere ayaa sheegay in dhulka uu yimid madaxweynaha dalka Kenya ee Uhuru Kenyatta uu yahay dhulka ay Soomaaliya leedahay balse ay Kenya xoog uga qabsatay, taas oo uu ku tilmaamay inay muujineyso in dalka aysan ka jirin dowlad balse ay joogaan dad calooshood u shaqeystayaal ah.
Wuxuu Sheekh Cali Dheere sheegay in arrintaasi ay muujineyso in dowladda Soomaaliya ay tahay mid aanay awood u laheen in dalka ay ka talliyaan ay si xuriyad leh ku maamulaan.
“Dalka Soomaaliya wax dowlad ah kama jirto, waxaa jooga calooshood u shaqeystayaal doqomo ah, Uhuru Kenyatta waa nin booqanaya dhul ciidamadiisu qabsadeen mana ogeysiin qoladda dowladda isku sheegaya iyaga ayaa u baahan inay ogolaansoha ka heleen Kenya” Sidaas waxaa yiri Sheekh Cali Dheere.
Dhinaca kale, Sheekh Cali Dheere ayaa sheegay in Uhuru Kenyatta ay isugu mid u tahay Kenya iyo Soomaaliya, wuxuuna sababta safarkiisa ku tilmaamay inay tahay mid uu ku raadinaayo in dib loogu doorto doorashada maadaama dalka Kenya ay dhawaan ka dhici doonto doorasho.